Qormadii: 13aad - Page 13
Xeer-dejin iyo Xukuumad is-xanbaar ah - Qormadii: 13aad
Hadda maalintii Wasiirka Warfaafinta iyo Wacyi-gelinta la ii magacaabay Madaxweynuhu ereyadii uu adeegsaday waxa ka mid ahaa dhiig-bax ayay nagu tahay kirada TV-ga Qaranka laga qaadaa ee arrimaha aad wax ka qabanayso ha ugu horreyso. Maantana isaga oo aan sharciyaysnayn ayuu siddeed wasaaradood ka miisaaniyad batay. Ma maqli jirteen: “Midi waa yaab, midna waa yaabka yaabkii.” Wixii hore oo dhami salleelo ayay iska ahaayeen e’, yaab iyo yaabka yaabkii waa kan maanta jira ee dhabanno-hayska inagu riday.
Bal aan soo xiganno Wargeyska Hubaal, Vol. 01, Cadadkii 136aad, Isniin, 07dii, Jeeniweri, 2013ka oo qoray:
“Qormada maanta iyo Dhaliilaha Miisaaniyadda waxa aynu ku soo qaadan doona kuna lafo guraynaa mid kamid ah Hay’addaha Madaxa banana oo runtii Miisaaniyaddiisu ka badan tahay wadarta lacagta siddeed (8) wasaaradood oo ku jira miisaaniyadda. ……haa siddeed bay ka badan tahay weliban ah kuwo laf dhabar inoo ah. Hay’addani waa SLNTV oo bilo ka hor uu laga hoos saaray Wasaaradda Warfaafinta iyo wacyi gelinta oo uu ka tirsanaan jiray. Tv-ga qaranka waxa Miisaaniyadda sanadkan loogu daray lacag qadarkeedu yahay 15,591,636,540 Slsh, (Shan iyo Toban Bilyan, Shan boqol iyo Kow iyo Sagaashan Milyan, Lix boqol iyo Lix iyo Soddon Kun, Shan boqol iyo Afartan Shilin. waxa ku laban-laabmaysaa Wasaaraddii laga madax bannaaneeyey ee warfaafinta oo iyadda miisaaniyadeedu tahay keliya 8,170,279,600 Slsh. SLNTV waxa uu la miisaaniyad yahay wasaaraddaha:
1. Warshadaha oo loo qoondeeyey 1,419,670,000 Slsh
2. Dib-u-dejinta oo loo qoondeeyey 1, 890, 403,000 Slsh
3. Diinta iyo Awqaafta oo loo qoondeeyey 2, 217,810,000 Slsh
4. Qorsheynta Qaranka oo loo qoondeeyey 2, 253, 987, 000 Slsh
5. Gaashaandhigga oo loo qoondeeyey 1, 692, 133,000 Slsh
6. Beeraha oo loo qoondeeyey 2, 612, 324, 000 Slsh
7. Kalluumaysiga oo loo qoondeeyey 2,199, 128, 00 Slsh
8. Caddaaladda oo loo qoondeeyey 1, 784, 720, 000 Slsh.
Wasaaraddahaas oo aanu tusaale u soo qaadanay uun balse ay jiraan kuwo la mid ahi waxa isu geynta lacagta sannadkan loogu daray miisaaniyaddu noqonayaa 15, 78,060,175 Slsh Bilyan (Shan iyo Toban Bilyan, Toddoba Boqol iyo Sideetan Milyan, lixdan kun iyo boqol iyo Shan iyo toddobaatan shilin), lacagtaas marka laga gooyo Miisaaniyadda TV-ga dawladda waxa waliba uu dheeraanayaa oo uu ka badan yahay 531, 455 Slsh oo ah nus malyuun (shan boqol iyo kow iyo soddon shilin). Arrimahaas oo dhan marka laga yimaado waxa Caqliga saliimka ahi is weydiinayaa sababaha amaba baahiyaha daruuriga ah ee uu daboolo TV-ga qaranku maxay yihiin, muxuu dheer yahay Warbaahinta kale ee madaxa banaan TV-yada kale ee dalka ka jiraa se Tayo ahaan muxuu kaga tilmaaman yahay ee uu dheer yahay, iyadoo walba Tv-yada kale ee madaxa banaani iyagoo aan dhaqaale ahaan meel ku tiirsanayn ay iskood isu bixiyaan waliba bulshadu kaga kalsooni badan tahay TV-ga Qaranka. Su’aal kale ayaa khadka qalinka ka dhex guuxaysa oo uu jawaabteeda la’ yahay, oo waa wasaaraddan xaqeedii la duudsiyey ee Warfaafinta, Maxaa godobta Intaa le’eg looga galayaa ee iyadoo ah muraayaddii qaranka koboca Miisaaniyaddeeda looga door biday Waax yar oo hore u hoos iman jirtay. Miyaan loo baahnayn Waaxaha dawladdu ku xisaabtanto ee warfaafintu ka kooban tahay, Miisaaniyaddan aan tobanka Bilyan gaadhin ee loogu daray sanadkani sidee ayay u maarin kartaa Waaxdii Radio Hargeysa, DAWAN, SOLNA iyo waliba waaxdii dhaqanka ee laga soo wareejiyey Wasaaradda dhalinyarada. Haddii laga maarmi waayay oo dhaqaale intaas loo heley, bal waxa ay ku xidhnaan doontaa masuliyiinta warfaafinta oo Siday u madhxinayaan ama musuqa lagu xanto ku xidhnaan doontaaye, TV-gan yaa gaar loogu seeteeyey, Dhaqaalahani ka badan baahi uu qabo e Ma naas nuujin baa lagu sharciyeynayaa. Awalba Shaqaalaha dawladda gaar ahaan Wasaaradda Warfaafinta oo madax-xigeennada miisaaniyadda loogu daro tayaynta iyo taakulaynta baahiyaha lasoo gudboonaada hore loo farsamaysan jiray ayaa haddana TV-gii oo caaglayaal hadda la ciir ciiraya la doonayaa in magacii iyo duruufihii shaqaalaha lagu maxaafsado.”
Maanta xaaladda dalkeenna iyo dadkeennu ku jiraa waa ay ka duwan tahay xaaladihii nidaamkii Siyaad Barre ku amar-ku-taaglayn jiray. Looma baahna cid la xuuraamo iyo cid la dabo-galo. Meel walba waa laga doobyayaa oo dawladdii ayaa looga hanjabayaa. Madaxweynihii dal iyo dadba ugu sarreeyay ayaa waxaan milgihiisa ahayn lagula hadlayaa maalin walba…….habeen walba…….saacad walba……..daqiiqad walba. Cid wax qarsata oo la soo xuraamaa ama la daba-galaa ma jirto. Wixii wejiga ayaa la iska saarayaa oo adiga oo arkaya ayaa laguu sheegayaa. Habeen walba TV-yadii……Maalin walba Wargeysyadii……ayaa wax walba laga odhanayaa. Cidi is-ma qariso, waxna inooma kala qarsoona. In aynu is-qabqabanno ayuun baa inoo hadhsan.
Uma baahnin Hay’ad Sir-doon oo tii Nabad Sugidda ee Siyaad Barre oo kale ah. Bal waxaan ku talin lahaa:
a. Kolka hore aynu ogaanno oo qeexno waxaynu u baahan nahay wuxu yahay,
b. Ujeeddooyinka aynu ka yeelan karnaa maxay yihiin,
c. Sidee ayaynu u waafajinaynaa Dastuurka Qaranka iyo Bayaannada caalamiga ah ee Xuquuqal Insaanka ee aynu qirnay in aynu aamminsan nahay,
d. Dastuur ahaan saddex Ciidan Qaran oo keliya ayaa I noo sharciyaysan ee midkee ayaynu hoos geynaa? Haddii aynu doonayno in ay noqoto Hay’ad Madax bannaan oo Madaxweynaha hoos timaadda sidee ayaynu Dastuurka Qaranka iyo Xeerarka kale ee dalka u yaalla u waafajinnaa?
Had iyo jeer waxa inoo caado ah in aynu qoraalladeenna ku jar-jarno ama ku qurxinno: murti, maah-maaho iyo maansooyinba. Inta bandanna waxay galaan halkii ay qoraallada aynu xiganaynaa inoo geli lahaayeen. Sidaa darteed ayaan aniguna inta badan maansooyinka u soo xigtaa. Maxaa yeelay, wixii ina soo maray ee taariikh ahaa waxaynu ka heli karaynaa heesaha iyo maansooyinka. Kolka ay sidaa tahay, kuwa loo iisho ama inta badan la soo xigtaa waa kuwa qoran ama mareegaha laga heli karayo. Waxaan qormooyinkeennii koobnaa ee taxanaha ahaa ku soo xidhayaa tuduc aan ka soo ammaanaysanayo Cabdillaahi Suldaan (Timacadde). Waxaan tuducan ka soo qaadanayaa maanso uu Wareeggii NFD ka tiriyay 1964kii, waxaanu yidhi:
“Wixii dhacayba nimankaan ku waday, in aynu weydiinno,
Mar hadday u weysaysatoo, weliyo loo haysto,
Aniga yaan waxbaynu isu nahay, laygu weyrixinne,
Ninkii weliba sii eegayaa, haw wishiirriyo e’,”
Ugu danbaynna bal iga guddooma maanta heestan aan ku soo gunaanadayo taxanahaygan 2aad ee taariikhiga ahaa. Waa hees gaaban oo aan kaga warramayo dhibaatadii xornimada loo soo maray, waxa taagan iyo in ay xaaladdu ku danbayn doonto sida Eebbe qaddaro iyo doonista ummadda sidii looga soo joogay goobihii taariikheed ee ina soo maray.
Xil nimaanu solin weli:
Dirirtaan u xeydnaa,
Xabkii aan buruurshiyo,
Xinjirtii an daadshiyo,
Xoolihii la saydhiyo,
Marinnada xanuunka leh,
Xornimadaan u soo maray,
Xil nimaanu solin weli,
Xummaddiisa aan qabin,
Dantiisuun u xoogsada,
Oon weliba xeer iyo,
Xadhig aan ka yaabayn,
Xaabaduu naf moodiyo,
Xer-u-dhalanta tayda ah,
Gaws uma xaraashaan,
Inta geesi xay yahay.
Qarannimadu waa xubin,
Xannaaniyo daryeel iyo,
Xanan laga idleeyiyo,
Xakab loo adkeeyiyo,
In la xoojo kaa mudan,
Haddii ay dad loo xulay,
Xoor kama durduurtaan,
Dacar uun ka xooxsade.
(Dhammaad iyo mahadnaq waqtigii aad Qormooyinkan koobnaa aad ku qaadateen.)